DHAGEYSO: Khasaaraha qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Muqdisho & Booliska oo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Khasaaraha qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Muqdisho & Booliska oo
DHAGEYSO: Khasaaraha qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Muqdisho & Booliska oo
Muqdisho (Halqaran.com) – 5 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay maqaayad u dhow dugsiga tababarka ciidamada booliska Soomaaliyeed Jeneraal Kaahiye degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho.
Afhayenka booliiska Soomaaliyeed, Sadiiq Aadan Cali oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay maqaaxi ay dad shacab ah fadhiistaan oo u dhow dugsiga booliiska Jeneraal Kaahiye.
“Naftii haligaha waxa uu galaaftay nolosha shan qof oo rayid ah iyo isaga oo lix ku ah, waxaana ku dhaawacantay ilaa iyo 8 qof, ciidanka booliska ayaa gar gaar caafimaad u fidiyay dadka shacabka ah ee waxyeelada ka soo gaartay” ayuu yiri Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Sidoo kale, afhayeenka Booliiska ayaa sheegay inuu socdo baaritaan ku saabsan qofka is qarxiyey iyo sida ay wax u dhaceen.
Halka hoose ka dhageyso Codka Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed:
Maqaayad laga cunteeyo
Qarax ismiidaamin oo ka dhacay Muqdisho